OEM Rewoda USB-C Hub na PD factory na suppliers | Rewoda
email Nkwado marketing@rewoda.com
USB Wall chaja
USB Ndenye chaja
Maka Smart Hardware
N'ihi na ezinụlọ ngwa
N'èzí ike ọkọnọ
OEM / ODM Ike
Akwụkwọ ikike Support
Rewoda Multi-ọrụ ebe ntibànye 6 na 1
Rewoda USB-C ka Mini Display nwanyi Port
Rewoda ụdị c cable Ụdị-C TO HDMI
Rewoda ehiwe ebe ntibànye 11 na 1
Rewoda USB-C Hub na PD
Rewoda USB C HDMI nkwụnye 7 na 1 Hub
7 na 1 ụdị c ka HDMI nkwụnye
USB-C Hub na ike nnyefe
Rewoda USB C Hub na USB3.0 * 1, HDMI: 4k @ 30Hz, VGA, Audi ...
USB-C ehiwe maka MacBook
Rewoda USB 3.0 n'ógbè nlekọta ọrụ Multi-ọrụ ebe ntibànye
Rewoda 8 na 1 USB-C ehiwe
Rewoda USB-C n'ógbè nlekọta ọrụ 5 na 1
N'ala Dabara na USB version: 3.0
Type c n'ọdụ ụgbọ mmiri: PD3.0
Nke a USB-C Hub nwere Multi-ọrụ interface n'otu iji kwekọọ gị ngwá. Na Multi-mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri USB chaja nwere ike dozie nsogbu nke MacBook n'ọdụ ụgbọ mmiri njikọ mgbochi. Ke adianade do, nke a Multi-mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri USB chaja nwekwara ike izute mpụga mmụba nke iji na-enye a siri ike ike maka akwụkwọ na kọmputa. Ọ nwere ike ijikọ ọzọ ngwaọrụ n'otu time.And Nke a USB-C Hub support ọkụ-swappable, plọg na play, mfe iji na-free ọkwọ ụgbọala na-akwado maka Windows XP / Vista / 7/8 & Mac OS, Linux. Na ọ na-akwado Full-ọsọ (5GMbps) USB na ngwaọrụ profaịlụ. O kwesịrị ekwesị ka ndị Mac na Ụdị C interface na òké, kaadị agụ, etc. Akwụkwọ ịde njikọ ihe adaba. Video, ụlọ ọrụ nzukọ ihe adaba. Obere ihuenyo sekọnd ibu nnukwu ihuenyo. HDMI Audio na Video synchronized mmepụta, Ịkekọrịta Obi ụtọ Time.
Si ọtụtụ mba plọg dị
Nke a USB-C Hub nwere amamihe kpatụ mmepụta voltaji, otú o kwesịrị ekwesị ka mba ọ bụla. Na obere ojii n'ezie mfe na-ebu ndị dị otú ahụ a dị ike Nchaji ikike. Ya mere, nke a USB-C Hub bụ nhọrọ kasị mma n'ihi na ndị mmadụ, dị nnọọ aka mgbe n'èzí ma ọ bụ n'ụlọ.
Interface ụdị: 3 x USB3.0, PD, SD na TF n'ọdụ ụgbọ mmiri, HDMI + RJ45
Pịnye c n'ọdụ ụgbọ mmiri: PD3.0
More Port, More Ntụsara
SD / TF kaadị oghere
Pee akpa ke defult
* N'ozuzu ngwaahịa ga-akarị a Pee akpa.
* Ahịa pụrụ inye gị ngwugwu imewe sere na anyị nwere ike inyere aka ka ndokwa mmepụta dị gị imewe.
Rewoda anọpụ iche retail ngwugwu
* Anyị na-enye ọkọlọtọ retail ngwugwu imewe, ahịa nwere ike re-imewe na anyị diecut.
Services & Nkwado
Sample Nnweta & Policy
Anyị nwere ike inye samples dị ka ndị ahịa 'chọrọ ka ha akwụkwọ, na samples iwu ga-deducted si mkpokọta na-eri nke uka wee, na ibu ga-akwụ ụgwọ site na ndị ahịa.
Di / warranties / Usoro na ọnọdụ
Anyị na-ekwe nkwa anyị ngwaahịa àgwà. Anyị ga-enye ihe niile anyị na ndị ahịa na n'elu mma ngwaahịa na nnọọ asọmpi price ke otu ubi.
Export / Import nhazi Support
Anyị nwere ike inye ezi aka maka mbupu omenala, na-enye mbupụ akwụkwọ, na àgwà nnyocha akụkọ.
Anyị na-enye ihe kasị mma mgbe-sales ọrụ n'ihi na anyị customers.Such dị ka: Anyị na-esochi ahịa nzaghachi na aro mgbe nnyefe iji mma anyị ọrụ. Anyị nnyocha anyị ahịa si ahịa conditions.Our sales nnọchiteanya ga na-na-eleta ndị ahịa na aka na-edozi nsogbu ọ bụla.
Ga-ekwentị gị ga-emebi ma ọ bụrụ na ị na-adịghị Kwụpụ chaja mgbe ọ bụ zuru?
The ike management nke oge a mobile phones zuru okè. Mgbe ekwentị mkpanaaka bụ full, chaja bụ na ìhè ibu ọrụ, na mmepụta ugbu a bụ nnọọ obere. N'ihi na batrị bụ ihu ọma full, na nke ugbu a na ike igba bụ nnọọ obere. N'oge a, mgbawa na-akpaghị aka na-akwụsị odori na batrị mgbanwe n'ahụ mode. Ọzọkwa iji mpụga chaja-arụ ọrụ ọnụ. Na Ozizi, ọ dịghị ihe mmerụ ahụ na ekwentị n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe nchebe usoro nke na-achịkwa usoro a. Otú ọ dị, na-ewere na mgbe ijikọ chaja, usoro-aghọ mgbagwoju anya, na ihe gbasara nke puru nke nsogbu ga-aghọ elu, n'ihi na ọ bụ ihe jupụtara Anam Udeme ma ọ bụ, na ọ bụ gị na-ekpebi. Ịtụle nchekwa, unattended ọnọdụ, ọ dị mma ka ịkwụpụ ya.
Nwere ike na ekwentị mkpanaaka chaja ga-eji na na Taiwan?
Dabere na voltaji na chaja, na voltaji na-emekarị e biri ebi n'elu chaja:
Ọ bụrụ na ị na-ebipụta 100 ~ 220V na ya, ị nwere ike iji ya na Taiwan.
Ọ bụrụ na ị na-ebipụta 220V, mgbe ahụ, gị mkpa iji mee ka a akakabarede anya.
Gịnị bụ ugboro nke mobile chaja ekwentị?
The ugboro ole dịgasị dị ka voltaji nke mba dị iche iche.
China si otu-adọ eletriki ugboro bụ 50Hz. Dị ka mbido ọnụ ọgụgụ, zuru ụwa ọnụ, otu-na-adọ ọkụ eletrik nwere ihu ọma na abụọ frequencies nke 50 Hz na 60 Hz, na voltages dị iche iche, sitere na site 100, 110, 120, 127, 220, 230, na 240.
Gịnị banyere mgbe-sales ozi?
Anyị na-enye a 12-ọnwa akwụkwọ ikike.
Biko chere free ka Kpọtụrụ US!
Next: Rewoda ehiwe ebe ntibànye 11 na 1
4 1 USB-C Hub
8 1 USB-C Hub
Hub ebe ntibànye
USB 3.0 n'ógbè nlekọta ọrụ
Eriri 3.1 Gen 2 Hub
USB C Hub 8-Na-1
USB-C Hub N'ihi MacBook
USB-C Hub With Power nzipu
USB-C n'ógbè nlekọta ọrụ
Rewoda USB C HDMI nkwụnye 2 na 1
110-220V obere ike ojii 160Wh Super Lar ...
USB ụgbọ ala chaja
5V 4.8A Wall chaja na sọrọ USB maka US mgbidi ...
Ụdị-C USB, Qi Ikuku chaja, USB C Hub 8-Na-1, Eriri-C USB, Ụdị-C Hub, ikuku chaja,